Madaxweynaha Faransiiska Oo Shuruud Ku Xidhay Talaabo Milatari Oo Uu Ka Fuliyo Wadanka Suuriya
(Hadhwanaagnews) Wednesday, February 14, 2018 15:20:42
Madaxweynaha dalka Fransiiska, Emmanuel Macron ayaa ku hanjabay inuu duqeyn doono Suuriya haddii ay caddaato wararka sheegaya in xukuumadda Dimishiq ay dadka rayidka ah u adeegsatay hubka kiimikada.
" Waan duqeyn doonaa goobaha lagu farsameeyo ama laga soo abaabulo hubka kiimikada" waxaa sidaasi yidhi madaxweyne Macron.
Madaxweynaha Fransiiska ayaa sidoo kale sheegay in sirdoonka Faransiiska aanay ilaa iyo imika helin cadeymo muujinaya in dawladda Suuriya ay adeegsatay hub kiimika ah.
Hadalka hogaamiyaha Faransiiska ayaa imanaya xili bishii January ee sannadkii aynu soo dhaafnay ay soo baxeen warar sheegaya in dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Bashar Al- Asad looga shakiyay inay adeegstaay hubka wax
Sagaal qof oo uu naqaska ku dhegay ayaa lagu daweeyay cusbital ku yaala Suuriya, kadib markii bam la rumeysan yahay in laga sameeyay hubka kiimikada lagu duqeeyay magaalo ay maamulaan mucaaradka Suuriya horaantii bishan.
Mucaaradka dalkaasi ayaa dhankooda sheegay in diyaaradaha sida qumaatiga u kaca ee dawladda ay bam ku garaceen magaalada Saraqeb ee ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka Idlib, balse dowladda Suuriya ayaa beenisay eedeymaha sheegaya in dad rayid ah ay u adeegsatay hub kiimika ah, waxaana ay intaa ku dartay inaanay bartilmaameedsanin dadka rayidka ah.
Mar uu ka hadlayay magaalada Paris ee dalka Fransiiska ayaa maadxweynaha dalkaasi waxaa uu hoosta ka xariiqay sida dowladdiisa aanay wax dulqaad ah ugu heynin adeegsiga hubka kiimikada.
Madaxweyne Macron ayaa waxaa kale oo uu sheegay in ahmiyadda koowaad ay tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada, balse hadii la xaqiijiyo tallaabadan la sheegay in dowladda Suuriya ay ku dhaqaaqday uu Faransiiska qaadi doono tallaabo milateri oo ka dhan ah arrintaasi.
Sannadkii aynu soo dhaafnay madaxweynaha Faransiiska ayaa dhigiisa Ruushka u sheegay in adeegsiga hubka kiimikada ee gudaha dalka Suuriya ay tahay mid Faransiiska uu meel adag ka taaganyahay, haddii ay dhacdana uu jawaab degdeg ah ka bixin doono.
Macron oo jimcihii aynu soo dhaafnay khadka taleefonka kula xidhiidhay Vladmir Putin waxaanu ku wargeliyay walaaca dawladiisu ay ka qabto suurtagalnimada ah in dad rayid ah loo adeegsaday hubka wax gumaada.
Sannadkii 2013-ka ayay aheyd markii weerar loo adeegsdaay hubka kiimikada uu ka dhacay meel u dhaw caasimadda Dimqishiq, xiligaasi oo dawladaha Mareykanka iyo Ruushka ay ku heshiiyeen qorshe lagu burburinayo keydka hubka kiimikada muddo sanad ah, balse hey'adda ka hortagga adeegsiga hubka kiimikada ayaa diiwan gelisay in gudaha dalka Suuriya lagu adeegsaday hubkaasi.
Bishii April ee sannadkii hore, weerar lagu qadaay magaalo ay maamulaan mucaaradka Suuriya oo lagu magacaabo Sheikhoun ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof oo lagu arkay callaamado muujinaya in hubka kiimikada lagu weeraray.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay inay arkeen diyaarado dagaal oo weeraraya magaalada, waxaana xiligaasi soo shaac baxay muuqaalo muujinaya dad u badan caruur oo ay waxyeelo ka soo gaadhay weerarka, kuwaas cabudh ka sii daynaya Afk, Inka badan sideetan caruur ah ayaana ku dhimatay weerarka.
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad iyo iyo dawladda ay xulafada yihiin ee Ruushku waxaa ay ku celceliyeen in arrintaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin, iyadoo dawladda Suuriya ay intaa ku dartay inay bartilmaameedsatay oo keliya haamo ay leeyihiin mucaaradka oo ay ku jiraan hub kiimika ah.